Home News Xildhibaan Jeesoow oo afka furtay”Qaraxyada maxaa looga adkaan la’yahay”
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo kamid ah Xildhibaanadda Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay qaraxyadda mudooyinkii dambe kusoo batay Muqdisho oo ay geysanayaan Al-shabaab.
Sidoo kale waxa uu sheegay in kontoroolka ay ku sugan yihiin Ciidamadda Dowladda ay waqti walba maraan ragga ka Tirsan Shabaab, balse aan la ogaan karin shabaabka halkaas maraya.
“Sida ay ku badbaadi karaan shacabka ayaa ah, Kii Ganacsade ah, kii guri leh, kan karaashka leh, kan wadada maraya in ay soo sheegaan ragga shabaab ka tirsan,Shabaab dadka ayay ku dhex jiraan, Kontorooladda ayay maraan, si ay usii jirto dowladdnimadda Soomaaliya, waa in hal meel loogu soo wada jeestaan ragga ka Tirsan Shabaab”, ayuu yiri Xildhibaan Jeesow.
Hadalka Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa imaanaya xili todobaadkaan laba qarax ay ka dhaceen Xarunta Tiyaatarka, iyo Taaladda Daljirka Dahsoon ee Magaaladda Muqisho,waxana ku dhintay 23-qof oo shacab iyo Ciidamo isugu jirey.
Previous articleDhaqdhaqaaqyo Ciidan oo lagasoo warinaayo Gobolka Hiiraan
Next articleDowlad diiday in ay Ciidamadeeda Soomaaliya ka saarto ka dib markii lagu amray
Wiil Dhalinyaro Aha oo Ku Dhintay Miino Uu Aasayay